सभामुख सापकोटा सिन्धुपाल्चोकको पहिरोपीडित बस्तीमा (तस्बिरहरू) – Khabar Silo
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सिन्धुपाल्चोक बाह्रविसे नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित जम्बु पुगेका छन्।
गए राति गएको पहिरोमा ११ घर बगाएको र २ जनाको मृत्यु भएको घटनापछि त्यस ठाउँको अवस्था बुझ्न बिहीबार सभामुख सापकोटा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चढेर जम्बु पुगेका हुन्।
सभामुख सापकोटाले जम्बुका पहिरोपीडितलाई भेटेका छन्। सभामुख सापकोटाको बुधबार आँखाको शल्यक्रिया गरिएको थियो। शल्यक्रिया गरिएको एउटा आँखाको पट्टी अझै खोलिएको छैन।
बाह्रविसे जम्बुबाट चार जना घाइतेलाई उद्धार गरी काठमाडौंको ह्याम्स अस्पतालमा ल्याइएको छ। पहिरोमा परी हराइरहेका १६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। उनीहरूको खोजि कार्य जारी छ।
Posted on September 8, 2020 September 8, 2020 Author khabar silo
काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३९६. जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा ३००, ललितपुरमा ३८ र भक्तपुरमा ५८ जना गरी जम्मा ३९६ जना संक्रमित थपिएका छन् । यसअघि सोमबार (हिजो) काठमाडौंमा २९३, ललितपुरमा २० र भक्तपुरमा १३ जना गरी जम्मा ३२६ जना संक्रमित थपिएका थिए। नेपालमा […]
काठमाडौं- नेपालमा शुक्रबार थप ११ जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । योसँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या १३७ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नियमित लाइभ अपडेटमा सो जानकारी दिएका हुन् । यसअिघि विहीबार काठमाडौंकी एक महिला, मकवानपुरका एक पुरुष, सप्तरीका एक पुरुष, […]
सरकारले हवाई उडान र लामो दुरीका यातायातलाई भदौ मसान्तसम्मका लागि रोक लगाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना संक्रमण बढेकाले हवाई उडान र लामो दुरीका यातायात स्थगित गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई बताए। ‘अब लगभग पहिलाको जस्तै हुन्छ। लकडाउनको नाम नदिइएको मात्रै हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘कार्यालयमा पनि पचास प्रतिशत मात्रै कार्मचारी राखेर काम […]
कोरोनाबाट बिरामी भएका ७० लाख ७१ हजारभन्दा बढी व्यक्ति निको भएर फर्के